Shir-weynaha madaxda urur goboleedka IGAD oo Muqdisho ka furmay - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaShir-weynaha madaxda urur goboleedka IGAD oo Muqdisho ka furmay
Shir-weynaha madaxda IGAD oo Muqdisho ka furmay maanta oo Talaado ah. Sawirka: Radio Muqdisho.
Muqdisho-(Puntland Mirror) Shir madaxeedka wadamada ku bahoobay urur goboleedka IGAD ayaa maanta oo Talaado ah si rasmiya uga furmay caasimada Soomaaliya ee Muqdisho.
Madaxweynaha Soomaaliya oo dalkiisa martigeliyay shirka ayaa si rasmiya u furay shirka.
Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyata, Raysulwasaaraha Itoobiya Hailemariam Desalegn iyo Madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni ayaa shirka kasoo qaybgalay.
Waxaa kale oo shirka kasoo qaybgalay masuuliyiin sar sare oo matalaya wadamada kale ee IGAD kamid ah.
Shirkan ayaa ah kii kowaad oo Muqdisho lagu qabto tan iyo markii la asaasay urur goboleedka IGAD 30-sanno kahor, sida ay sheegeen saraakiisha dowlada Soomaaliya.
Arrimaha ugu muhiimsan ee shirka looga hadlayo ayaa waxaa kaimd ah xaaladaha wadamada Soomaaliya iyo Koonfurta Suudaan.